Ungayisebenzisa kanjani i-Google low quality backlinks ithuluzi lokusesha?
Abaphathi beWebhu basebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokuthola ijusi lokuxhumanisa kumawebhusayithi abo. Ngezinye izikhathi, izindlela zabo azikude nezomthetho. Zonke izixhumanisi zangemuva azidalwanga ngokulinganayo. Njengoba sekuvame ukukwenzeka, ezinye izixhumanisi zakho zangaphandle zingabaluleka futhi zitholwe ngokunembile, kanti ezinye zivela kumgangatho ompofu noma awusatholakali.
i-Google yenza konke okusemandleni ukunika amandla abanikazi bewebhu basuse izixhumanisi zabo ezingalungile futhi baphunyuke ezinqumweni. I-Google Disavow Ithuluzi iba yindlela enhle yokuhweba abathengisi be-intanethi kusukela ekubuyekezweni kokubuyekezwa kwe-Penguin. Ngonyaka owedlule we-2012 ukubuyekezwa kwe-Google Penguin kuqhube isiteji sokwenza ngcono injini yokusesha futhi kususwe zonke izixhumanisi ezingalungile ze-spammy kusuka kumanethiwekhi angasese ebhulogi. Ngesikhathi esifanayo kudala izinkinga ezintsha futhi kuthinte kabi kakhulu umhlaba wonke we-SEO. Abaphathi bewebhu baqale ukuzama ukuhlukumeza lesi simiso ngokudala ama-backlink ogaxekile kumasayithi asemthethweni, ngomzamo wokunciphisa izikhundla zabo ku-SERP. Eminye yale mizamo yaphumelela. Izimpahla eziningi zathinteka ngethonya elibi labancintisana nabo. Yenze isidingo esinamandla sokulawula zonke izixhumanisi ezikhomba iwebhusayithi. Yingakho i-Google inqume ukwakha Ithuluzi Lokuxhumanisa I-Disavow Tool ukunikeza ithuba kubanikazi bewebhu ukuqapha zonke izixhumanisi zabo zangaphandle. Leli thuluzi lokusesha le-backlink lisize abanikazi bewebhu abanamakhulu ezinkulungwane ukulawula isimo sabo se-backlinks.
Kungani sidinga i-Google Disavow Links Tool?
Zonke izinqubo ze-SEO ezimnyama zingathinta kakhulu isikhundla sakho sesitifiketi nedumela, ikakhulukazi kusukela i-Google iye yacaca ukuthi izophoqa wonke amasayithi ahilelekile kunoma yikuphi ukuxhumeka kogaxekile.
Kuningi labanikazi bewebhu abangathanda ukuthola izixhumanisi kusayithi labo ngokuzenzekelayo futhi bakholelwa ukuthi kungenzeka ukudala iphrofayili yokuxhumanisa kwekhwalithi esikhathini esisodwa noma emibili. Yiqiniso, noma ubani angakwazi ukukhokhela izinsizakalo zokwakha izixhumanisi ze-spammy futhi athole izinkulungwane ze-backlink ezintsha emithonjeni yakhe yewebhu ngaphandle kwemizamo. Kodwa-ke, ngeke kube nomthelela omubi kunoma iyiphi indawo yokusesha injini. Umthombo wakho wewebhu awusoze walahlekelwa yi-spam yokuxhumanisa, kodwa ukuhlaselwa kogaxekile okukhulu nokuhlala njalo kungaphazamisa yonke imizamo yakho ye-SEO.
I-Google Disavow Links Tool ilungiselelwe ngokukhethekile ukunikeza amandla kumphathi wewebhu ukuthi abike futhi athumele izixhumanisi ze-spammy eziphansi kakhulu ku-Google, futhi uma behlaselwe ukuhlaselwa kogaxekile kwabaphikisana nabo ngokuqondile, lokhu kuzobasiza uphume kuwo futhi uhlanze idumela labo masinyane.
Ithuluzi lokusesha emuva kwe-Google lithola izixhumanisi zogaxekile namawebusayithi azidala, futhi ezimweni eziningi, ngeke zilimaze isikhundla sakho sewebhusayithi. Kodwa-ke, imithombo eminingi yewebhu ingahle ithinteke ngemisebenzi yokukhwabanisa, futhi inombolo yabo ikhuphuka ngokubuyekezwa kwesinye sePenguin.
i-Google ngeke ihloniphe emuva kwe-backlink kunoma yiziphi izizinda ozibikile zokusebenzisa i-Google Disavow Links Tool. Leli thuluzi liwusizo kokubili izinjini zokusesha kanye ne-webmasters njengoba kusiza ukwazi ukubaluleka kwangempela kuyo yonke imithombo yewebhu nokupholisa abahlukumezi bokubusa Source .